orodyahaanka cabdi bile cabdi oo casho sharaf muqdisho logu sameyay | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR orodyahaanka cabdi bile cabdi oo casho sharaf muqdisho logu sameyay
orodyahaanka cabdi bile cabdi oo casho sharaf muqdisho logu sameyay
Munaasabadaani casho sharaf ah oo lagu dhiira gelinayay halyey Cabdi Bille Cabdi ayaa xalay loogu qabtay magaalada Muqdisho,taasi oo ay ka qeyb galeen Wasiiro,Xildhibaano ka tirsan Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale.
Inta ay Munaasabada socotay ayaa lagu soo bandhigay Taariikhaha Dahabiga ah ee dalka u soo hooyay Cabdi Bille Cabdi,ayna tahay in taalo loo dhiso si ay ugu deydaan dhalinyarada soo koreysa.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada iyo Wasiirada ka qeyb galay Xaflada casho sharafta ayaa sheegay iney gacmo furan ku soo dhoweynayaan Cabdi Bille Cabdi,waxayna ku bogaadiyeen dadaalkii uu ku bixiyay sidii guulo taariikhi ah loogu gaarsiin lahaa dalka iyo Ummadda Soomaaliyeed.
Halyey Cabdi Bele Cabdi oo isna ka hadlay Munaasbadda ayaa u mahadceliyay mus”uulinyinta casho sharafta u sameysay, sidoo kale wuxuu sheegay soo dhoweynta uu kala kulmay Dowladda iyo shacabka ineysan jirin waxa loo dhigo.
Ugu dambeynti,Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Mudane Cilmi Cumar Ceysane oo soo xeray Munaasabadda lagu soo dhoweynayay halyey Cabdi Bille Cabdi ayaa xusay in halyey Cabdi Bille Cabdi uu yahay wali shaqsi u taagan Horumarinta Dharinyarada kuna soo dhoweynayaan Magaalada Muqdisho.
Previous articleTaliyaha ciidanka Asluubta oo saxaafada u sharxay hormarka shaqo abuur ee haweenka maxaabiista ah
Next articleMaxkamada sare ee CQ oo ku raacday xukunkii dilka ahaa ee horay Maxkamada darajada 1-aad ugu xukuntay Ex-G/Sare C/naasir Xoosh Maxamed